लाभकर बढी निर्धारण गरेको भन्दै एनसेलद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
गतसाता ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैया कर निर्धारण गरेको थियो। यसमध्ये करिब साढे ३९ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर उसले करिब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने मागदाबी गरेको छ।
'२१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९०० सय रुपैयाँ अर्थात १५ प्रतिशत पहिल्यै भुक्तानी गरिसकेकोले कानून बमोजिम लाग्ने पच्चीस प्रतिशत मध्ये तिर्न बुझाउन बाँकी दश प्रतिशत पूँजीगत लाभकर १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६ सयमात्र कर निर्धारण गर्नु, 'एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, 'यस विषयलाई पूर्णता प्रदान गर्नु र कर निर्धारण नभएसम्म निवेदक एनसेलको व्यापार/व्यवसायमा कुनै किसिमको व्यवधान खडा नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरीपाउँ।'
यो पनि पढ्नुहोस्ः कसरी पुग्यो एनसेलको साढे ६२ अर्ब कर?
वैशाख ९, २०७६ अतुल मिश्र
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकाे त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा स्वास्थ्य जाँच गरिएकाे छ । सोमबार बिहान उनको इन्डस्कोपी गरिएको हाे ।
राष्ट्रपति भण्डारी बिहान साढे ९बजे अस्पताल पुगेकी थिइन् । उनी इन्डस्कोपी गरेर‍फर्किसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. प्रेम खड्काले बताए।
प्रकाशित : वैशाख ९, २०७६ १२:२८